estrus အမျိုးသမီးများနှင့်နေ့စဉ်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများအရအထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏပြောင်းလဲခြင်း (Your Brain On Porn)
Physiol ပြုမူနေ။ 2014 ဇွန် 22; 133: 8-13 ။ Doi: 10.1016 / j.physbeh.2014.05.001 ။
အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြင်းထန်စွာအတိတ် 100 နှစ်ကျော်လေ့လာခဲ့ခဲ့ပြီး, ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ interaction ကအတော်ကြာကာလ၏သင်တန်းကျော်ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
ဒီစမ်းသပ်မှုမှာစမ်းသပ်အုပ်စုသည် (ဎ = 12) တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များအတွက်တစ်နေ့လျှင် 30 မိဘို့အမျိုးသမီး estrus မှနေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားခဲ့သည် 15 ရက်ဆက်တိုက် စဉ်ထိန်းချုပ်မှုအထီး (ဎ = 11) အမျိုးသမီးနှင့်အတူအပြန်အလှန်မပေးခဲ့ပါဘူး။ Ovariectomized အမျိုးသမီးဟော်မုန်းထိုးဆေးနှင့်အတူ estrus သို့သွေးဆောင်ခြင်း, ယောက်ျားနေ့ရက်တိုင်းဟာကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးသမီးနှင့်အတူအပြန်အလှန်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (တောင်ပေါ်, intromissions နှင့်သုက်) ၏ပမာဏကိုအများဆုံးအထီးကြွက်များတွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်4ရက်ပေါင်းတဲ့ကာလနှင့်အတူသံသရာမှရှာတွေ့ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်သွေးသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကအောက်ပါတိုင်းကတခြားနေ့ကစုဆောင်းခဲ့သည်။ testosterone အပြန်အလှန်၏ပထမနေ့၌အထွတ်အထိပ်တွေ့ရှိပြီးတော့အမျိုးသမီးနှင့်အတူအပြန်အလှန်မထိန်းချုပ်ကြွက်များ၏အဆင့်ကိုအနီးပြန်ပြုတ်ကျခဲ့သည်. ကနဦးအထွတ်အထိပ်ပြီးနောက် testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှုထိန်းချုပ်မှုထက်အမျိုးသမီးထိတွေ့ယောက်ျားအတွက်လျော့နည်းမြန်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့မတွေ့ရှိခဲ့သည်. ကျနော်တို့အထီးကြွက်နေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကအခါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသိသိအပြောင်းအလဲများပြသလေ့ရှိတယ်နှင့် testosterone ဟော်မုန်းသိသိသာသာ interaction က၏ပထမနေ့၌သာခြီးမွှောကျကြောင်းကောက်ချက်ချ။